FRP fan fan - China FRP fan vagadziri, vatengesi
Inzwi Insulation Tank Yekuderedza Ruzha
FRP Inzwi kuputira feni inoshandiswa zvakanyanya, inoshanda kune akasiyana mamiriro ekushanda, inoshanda simba kuchengetedza, chengetedza mutengo, kugadzira purofiti yako. Kuita kwepamusoro, kushanda kwakanyanya, kudedera kwepasi uye ruzha ruzha. Inoshandiswa zvakanyanya mukubvisa uye kupisa kweasidhi inokanganisa uye gasi realkali, kurasa gasi kurapwa uye kuchenesa, tsvina deodorization, nezvimwe (inokanganisa gasi nharaunda).
Washington City Offices Kudzoka Yakakombama Centrifugal Exhasut Fan Blower
Maindasitiri Emhepo Kuburitsa Shaft-coupling centrifugal fan
FRP centrifugal fan ndeye fan inogadzirwa neye FRP zvinhu, inonziwo anticorrosive centrifugal fan. Kazhinji, FRP centrifugal mafeni anogona kushandiswa mune dzimwe nguva neanokanganisa gasi kuburitsa inoparadza gasi.
Iyo gasi rinoburitswa haribvumidzwe kuve nezvinhu zvine viscous, guruva uye zvakaoma zvimedu zvishoma pane kana zvakaenzana ne150mg / m3, tembiricha yegasi isingasviki kana yakaenzana nemadhigirii makumi matanhatu, uye hunyoro hushoma pane kana hwakaenzana ne100%. FRP centrifugal mafeni haana kukodzera kune yakanyanya tembiricha nzvimbo. D mhando inoreva kune Shaft-inotyairwa coupling yekufambisa mhando
Carbon Simbi Shaft Inotungamirwa Dhizaini fan
Yakakwira Mhepo Kuyerera Rate Kufefetedza Feni
Dzakateedzana mafeni dzinogona kuburitsa gasi rinokanganisa rine acid, alkali uye makemikari zvinoumba. Kugonesa magasi haabvumidzwe kuve neinonamira, kusanganisira guruva uye rakaoma PARTICIPLE acuities aive 150 mg / m3, tembiricha yegasi ye80 ℃ kana zvishoma uye hunyoro hushoma hwe 95 % kana zvishoma, Rudzi urwu rwe fan rine simba rakakwirira, kurema kureruka, kwete nyore kuchembera, yakanaka ngura kuramba, ruzha rwakadzika, kumhanya kwakadzikama, nezvimwewo Iyo yakanaka anti - ngura uye acid - alkali fan. Mafeni anoshandiswa zvakanyanya mukati Chemical indasitiri, electroplating, oxidation, simba chirimwa, rabhoritari, wedunhu bhodhi, nharaunda chengetedzo michina uye dzimwe nzvimbo dzine dzinokanganisa magasi.
Nokia Mota Centrifugal Fan
Belt Inotyairwa Centrifugal Fani
Yakanaka kwazvo tembiricha yekudzivirira Iyo fan fan inosangana nezvinodiwa zveiyo GB / T13274-9 (-) moto yekudzivirira kodhi bvunzo muyero, uye haizokuvadzwa kana ikamhanya ichienderera kwemaawa makumi maviri nemaviri pasi pemamiriro ekushisa akakwirira. Kubudirira kwepamusoro uye simba rekushandisa Uchishandisa CAD, CFD uye zvimwe zvakateedzana zvekuongorora uye kutsvagisa uye kusimudzira software, fan fan iri yakakura kupfuura 80%, uye mamwe manhamba emuchina akakura kupfuura 85%, uye iyo curve yekushanda iri yakati sandara, inoenderana kumusoro ...
Nongedzo Engagement Shaft Inotungamirwa Centrifugal Fan NeLagre Mhepo Inoyerera
Ngura, kuputika uye kumira kweutsi Utsi Exhaust Blower Fan
Diki Saizi Anti-ngura Fani
Energy-yekuchengetedza uye inochengetedza zvakatipoteredza-inoshamwaridzika girazi faibha yakasimbiswa mafeni epurasitiki vane yavo yekutsvagisa uye yekuvandudza kugona kugona kugadzirisa ruzivo rwako rwe fan fan, kunyatso bvisa zvikanganiso, kuti iwe ugone kunakidzwa nemhando yepamusoro mafeni, uye kukubatsira iwe kutenga nekukurumidza uye kwakarurama kutenga zvisarudzo. F4-72-AType FRP Centrifugal Fan (Yakanangana Mota) inogadzirwa ne fiberglass yezvinhu zvakasanganiswa zvine chekuita nematanho ekuita esimbi 4-72-A centrifugal fan. Iyi yakateedzana yevafeni c ...
FRP Inzwi-chiratidzo Bhokisi
Fiberglass Inzwi rekusimbisa bhokisi-mhando mafeni anonyanya kushandiswa mukutsvaira tsvina, zvipenyu deodorization, mishonga uye makemikari indasitiri, pickling electroplating, rabhoritari, semiconductor indasitiri nedzimwe nzvimbo dzine acid uye alkali zvinoriumba uye zvemakemikari zvinoriumba zvinokanganisa gasi. Parizvino, kurira kwekuvhara bhokisi-mhando fan rinoshandiswa zvakanyanya, iro rinodikanwa mune yakaderera ruzha nharaunda. Inogadzikana kana ichifamba, uye yakanyarara kana ichimhanya. FRP Inzwi kuputira feni ...
Fume Kukwesha, Pedza Fani, Radial Nereza Centrifugal Fan, Yakakwira Pressure Centrifugal Fan, Centrifugal mutsinga dzinofamba nemukaka Fan, Imwe Inlet Centrifugal Fan,